I-infographic: Benza ntoni abantu kwi-Intanethi?
Uphando lwePew lomsebenzi we-Intanethi
NgoLwesihlanu, Novemba 18, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Benza ntoni abantu kwi-Intanethi? Le infographic ixelela impendulo… idibanisa iminyaka emi-3 yedatha kwi Pew i-Intanethi kunye noPhando ngeProjekthi yoBomi baseMelika ukusukela ngo-2009, 2010 nango-2011. Uphando olubanzi luhamba ngokonwaba, inethiwekhi, ezemali, iindaba, ushishino, ivenkile, uphando kunye nokuthenga!
Phantse iipesenti ezingama-80 zabantu abadala baseMelika basebenzisa i-Intanethi. Wakhe wazibuza ukuba benza ntoni kwi-Intanethi? Ngaba bathumela i-imeyile, bayothenga kwi-Intanethi, okanye basasaza iividiyo zeYouTube? Fumana apha ngezantsi.
Benza ntoni abantu yenza kakhulu kwi-intanethi? Thumela okanye ufunde i-imeyile. Benza ntoni abantu yenza okuncinci? Ibhlog! Ukunqaba kubanga imfuno… Ndiyayithanda into yokuba abantu abaninzi bengabhlogi… oko kuthetha ukuba ithuba lakho lokumanyelwa lilungile.
I-infographic evela Flowtown-Isicelo seNtengiso yeendaba zeNtlalo.
tags: isihlaloPew i-Intanethi kunye noPhando ngeProjekthi yoBomi baseMelikapew uphando lwe-intanethiyintoni abantu abayenza kancinci kwi-intanethizeziphi izinto ezenziwa ngabantu kwi-Intanethi
Sukuyifaka i-imeyile kwiBack Burner!
Igunya loKwakha lokuKhangela